Nei Epublibre isiri kushanda? Tarisa uone dzimwe nzira | Gadget nhau
Paco L Gutierrez | | vaverengi, General
Kana iwe uri muverengi webhuku, kune mikana yakawanda yekuti iwe zvakare uri mushandisi weiyo Epublibre webhusaiti, nekuti zviri pasina mubvunzo iwo akanakisa mapeji emahara emabhuku online. Zviri kuwedzera kuwana peji ino pasi kana pasina sevhisi, nekuda kwechikonzero ichi uye nekuti isu tinodawo kuverenga, tiri kuzobata zvese iri nyaya uye kurudziro yemamwe mabasa anoshanda izvozvi izvo Epublibre iri pasi.
Muzviitiko zvese izvo webhu yadonha, yakadzokera kubasa mukati memazuva mashoma, asi dambudziko nderekuti rinokanganisa kuverenga kwedu kana kukanganisa masikati atakange tichifunga kuishandisa kuverenga bhuku redu pabasa. Zvino izvo zvinoita sekunge tiri kusangana nedambudziko rakakomba, tiri kuenda kuzoongorora dzimwe dzinokwezva dzimwe dzekuitsivaDzimwe dzadzo dzakanaka zvekuti pamwe kune vamwe iri sarudzo iri nani kunyangwe Epublibre ichishanda nemazvo.
1 Asi ... Chii chiri kana chaive Epublibre?
1.1 Nzira yekuwana sei iyo Epublibre catalog?
2 Epublibre yanga iri pasi kwenguva yakareba.Ichange ichishanda zvekare?
3 Ini ndinogona kuwana Epublibre kunyangwe iri pasi? Pane nzira asi iine zviyero.
4 Dzimwe nzira dzeEpublibre
4.1 Mabhuku eAmazon
5 Kurudziro yemupepeti
Asi ... Chii chiri kana chaive Epublibre?
Kune vamwe vaverengi veapo neapo kana kunyangwe yeavo vakaoma kuverenga avo vakaverenga hupenyu hwavo hwese papepa, isu ticha tsanangura izvo Epublibre chii. Iri peji rave pamambure kubvira 2013 uye rakakwanisa kuunganidza mammoth raibhurari yemabhuku. Kana isu tikadzokorora yakatarwa dhata kubva kune yayo yekupedzisira kugadzirisa isati yapera kudonha, tinogona kuona kuti raibhurari isingasviki pamakumi mana nemakumi mana nemakumi manomwe neshanu emabhuku yakamhan'arwa uye angangoita zana nemakumi maviri emamwe mabhuku mukugadzirira. Raibhurari iyi yainyanya kuvakirwa pamazita echiSpanish, asi isu tinogonawo kuwana kuwanda kwemabhuku mune mimwe mitauro yepamutemo peninsula yakadai seValencian, Galician, Euskera kana chiCatalan.
Nzira yekuwana sei iyo Epublibre catalog?
Kuti tinyore pawebhusaiti ino zvakafanira kuti account yedu igamuchirwe, asi haisi kunyoreswa nguva dzose, tichafanirwa kuwana runyorwa rurefu rwekumirira kwatinogona kushandisa nguva yakareba tisati tagamuchirwa.
Pakati peakanyanya kubudirira padandemutande inyaya yekuti ine bhuku rekurongedza mabhuku, rinowanikwa zvakakwana kubva pabutiro rayo. Kudhinda nekugadzirisa mabhuku tinofanirwa kuve nhengo dzewebhu. Asi kurodha pasi mabhuku pane rusununguko rwakakwana, kuitira kuti chero munhu awane nekurodha pasi mabhuku sezvavanoda.
Ese mabhuku ePublibre anowanikwa muPub fomati, kunyangwe tichigona kuwana mamwe acho mune mamwe mafomati. Iyo ePub fomati ndiyo fomati inonyanya kushandiswa nevaverengi vemabhuku kana vaverengiKunyangwe zvichikwanisika kutarisa mhando iyi yemafomati pane mamwe mafoni kana makomputa, hazvitombokurudziro nekuda kwechiedza chebhuruu chemapaneru ayo, vanoneta maziso zvakanyanya. Zvekurodha pasi taizofanirwa kuona kuti takaisa chirongwa chekurodha pasi kwerukova.
Epublibre yanga iri pasi kwenguva yakareba.Ichange ichishanda zvekare?
Icho chokwadi ndechekuti Epublibre nhasi haigoneke kana tikapinda kubva kubhurawuza redu nekupinda pawebhu kero, haisi nguva yekutanga kuti mamiriro akafanana agare munguva, Epublibre akatambura madonhwe akakosha pane dzakawanda nguva, asi yakanga yave nguva yakareba kubvira payakange yatambura kudonha kwenguva yakareba kudaro munguva.
Unogona kudzokera? anogona zvechokwadi kudzoka, kungave neyako domain kana imwe yakasiyana. Kunyangwe zvese zvichiratidza kuti zvinogona kuramba zvichinonoka munguva yekuti tizviwane tisati tasvika pa100% webhu inoshanda. Dambudziko nderekuti kusanzwisiswa kunotonga, nekuti Epublibre haina chero mhando yeakaundi account pamasocial network, saka hatigone kuwana chero mhando yekutaurirana kubva kune vanogadzira.
Kubva kudonha kwayo, dzimwe nhoroondo dzeTwitter dzakabuda asi kunyangwe dzichiita senge dziri pamutemo hadzisi. Iyo chete "yepamutemo" account yatakakwanisa kuwana imwe ruzivo ndeyeyeiye munhu ari kutarisira kuchengetedza iyo Epublibre yekugamuchira masevhisi, mune yake account anga achiburitsa nhau nezvazvo.
Iyo chaiyo account ndeye @TitivillusEPL umo maringe neruzivo rwechangobva kuitika rakati pane zvishoma zvasara kuti Epublibre ishande zvakareNdinotaura izvi nekuti parizvino akamiswa, saka hatigone kuona yako Twitter nhoroondo kana zvinyorwa zvako. Hatizive kuti sei, asi iyo account yakavharirwa nevatongi veTwitter.
Ini ndinogona kuwana Epublibre kunyangwe iri pasi? Pane nzira asi iine zviyero.
Maitiro ekuwana Epublibre mune yazvino mamiriro. Sevhisi yakadaidzwa archive.org rinova nebasa rekuchengetedza mapeji ewebhu kuti vasarase zvirimo mumamiriro ezvinhu akadai. Saka iwe unogona kushanyira mawebhusaiti asingawanikwe uye senge iyi kesi vanogona kusazombove vanowanikwa zvakare.
Kuburikidza nekero yako ku archive.org isu tinokwanisa kuwana iyo webhu zvakajairika. Asi nekukosha kwakakosha, Hatisi kuzokwanisa kupinda mukati kana kuwana zvirimo zvakawanda zvisina kunyorwa pane archive.org. Pakati pazvo pane akanyanya kudzorerwa peji, nekuti archive.org inoita backup nguva nenguva. Hazvina kukwana asi zvirinani isu tichava nekuwana.
Dzimwe nzira dzeEpublibre
Tichaongorora dzimwe nzira dzakanakisa dzeEpublibre yekuverenga mabhuku mumafomati akasiyana siyana, ruzhinji rwacho rwakasununguka zvachose, asi vamwe vanogona kunge vaine rumwe rudzi rwekunyoresa.
Iyo mama chitoro chezvitoro zvese, yatove chitoro chakakurumbira pamhepo chenguva dzese, pamwe neakanakisa ekushambadzira-masevhisi ane (kwandiri akanakisa), zvakare ine pakati pezvakanaka zvayo zvekuve nebhuku rakakura raibhurari kana uri nhengo yepamusoro. Classics ezvinyorwa mumutauro wedu, senge anoshanda naCervantes, Lorca kana Miguel Hernandez ... nezvimwe. Pasina kukanganwa mabasa ekune dzimwe nyika akashandurwa muchiSpanish, nekwaniso yekuaodhaunirodha mumutauro wavo wepakutanga.
Amazon pamusoro peichi chese kupihwa kwemabhuku akaisirwa mune yako yekutanga kunyorera, zvakare inopa akawanda mabhuku kunyangwe iwe usiri nhengo, asi pamutengo we € 36 pagore Ini ndinofunga iri sarudzo yakanaka kwazvo, nekuti pamusoro peiyi sevhisi yebhuku, isu tine vamwe vazhinji, kusanganisira avo vari muchitoro kana vhidhiyo yepamusoro. Tichava nekutapira kwakanaka kutenga a Kindle Paperwhite iyo yatakatotanga kuongorora muActualidadGadget.
Takatotaura nezve ino webhusaiti kare muchinyorwa, nekuti kuburikidza nacho isu taigona kuwana Epublibre kunyangwe iri pasi. Zvakare pane ino webhusaiti tinogona kuwana zvinopfuura 18.000 mabhuku muchiSpanish. Kana tikawedzera mabhuku ese aripo mumitauro yakati wandei, tinowedzera huwandu hwemamiriyoni 1,4 emabhuku. Tinogona kurodha pasi zvirimo zvirinyore, zvese zviri mu PDF Chemhondoro ePUB, ese mazita anonyanya kutifadza.
Icho chiri pasina mubvunzo chimwe cheakakura masosi etsika yakanyorwa yatinogona kuwana pa internet, imwe yeakanyanya kukurudzirwa izvozvi Epublibre asisashande.
Dzvanya pane izvi Link Kuti uwane.
Mune ino kesi isu tichakurudzira a yakabhadharwa sevhisi pasi pekunyorera pamwedzi, kunyangwe isu tine iyo mukana wekuzviedza zvisati zvaitika kwemazuva makumi matatu. Kunyoreswa kwacho kunotipa anodarika 1000 mabhuku akanyorwa, pamwe nenhamba huru yemabhuku ehurukuro, chimwe chinhu chakakosha kune avo vane hutano hwemaziso kana kungoda kuteerera pavanenge vachizorora kana kuzorora pamubhedha.
Iwo mazita akaunganidzwa pakati pevanotengesa zvakanyanya, zvekare uye zvitsva. Tine chishandiso che iOS uye Android, saka zvichave zvakanaka kwazvo kana tichida kuwana kubva kune chishandiso chine aya masisitimu anoshanda. Iyo ndeimwe yemabhenefiti mazhinji ekubhadharwa, sezvo iri, sekutaura, Netflix yemabhuku.
Mukugadziri: Vi-Da Tec LLC
Verenga, dzidza uye kukura ndiwo mavara avo ekubata. Iyo yakakamurwa kuita zvikamu zvitatu, «Yakakurudzirwa mabhuku», «Mabhuku uye zvinyorwa muPDF» y «Zviwanikwa zvekuvandudza kuverenga kwako», misoro yekufarira kukuru nesarudzo yemabhuku. Govera emahara marezinesi mabhuku uye zvigadzirwa Creative Commons (isiri-purofiti sangano rakatsaurirwa kusimudzira kuwana uye kuchinjanisa kwetsika).
Imwe kambani hombe inotora chikamu mutsika dzakanyorwa iGoogle. Pamusoro pekupa asingaverengeki masevhisi kana iyo internet yekutsvaga injini par kugona, ine raibhurari hombe yemagetsi mabhuku. Tichawana imwe nhamba hombe yemabhuku mumadhijitari mafomati mune chero mutauro, kusanganisira chiSpanish.
Pamusoro pemabhuku, isu tinokwanisa kuwana magazini nemapepanhau saka zvavanopa zvakasiyana kwazvo. Iyi sarudzo chaiyo kana tichida kuverenga chimwe chinhu pano neapo, asi ini handikurudzire sosi sosi kana iwe uchifarira kuverenga mabhuku. Sezvo mazhinji anogona kungoverengwa uye kusadzikwa.
Mukuona kwangu kwekuzvininipisa kana chako chitandadzo chiri kuverenga mabhuku, Pasina kupokana, sarudzo yakanakisa ndeye kutora Kindle e-bhuku kubva kuAmazon, nekuti izvi zvine mapaneru ane tekinoroji isingaite hasha kune ziso. uye nemutengo wakaringana mukati, mukuwedzera Ini ndinokurudzira kunyorera kuAmazon prime, iyo ichatipa mukana weimwe yemaraibhurari makuru emabhuku, iine zvimwe zvakawanda zvinonakidza zvimwe zvekuwedzera, sekutumira mahara muchitoro chako kana sevhisi yePrimiyamu ine akateedzana uye mafirimu aunogona.
Kana iwe uchifunga kuti iripo dzimwe nzira dzakanakisa Tichave tichifara kuverenga maonero ako muchikamu chemashoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Gadgets » vaverengi » Nei Epublibre isiri kushanda? Tarisa uone idzi dzimwe nzira
Paco L Gutierrez akadaro
Kutenda nemupiro Marianito!
Pindura Paco L Gutiérrez
Kutenda kuna Marianito nekutumira iyi link, rinonakidza peji. kwaziso
Huawei Tarisa GT2 Pro: Wachi yakakwana kwazvo kusvika zvino